Deg Deg: Thierry Henry oo loo magacaabay macalinka cusub ee kooxda Monaco – Gool FM
RASMI: Kooxda Barcelona oo shaacisay lambarka uu u xiran doono saxiixeeda cusub ee Frenkie de Jong & Laacibka looga siibay
WARBIXIN: Maxaad ka ogtahay qisada Francesco Totti & Jaceylka xad dhaafka ah ee uu u qabo Roma?
Kooxda Chelsea oo heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixatay mid ka mid ah da’yarteeda
“Waan ku faraxsanahay inaan halkaan joogo” – Ramsey oo kasoo muuqday shirkiisii jaraa’id ugu horeeyay isagoo ah ciyaaryahan ka tirsan Juventus
Shax cajiib ah oo laga sameeyay xiddigaha beeca xurta ah lagu heli karo suuqan kala iibsiga xagaaga ee 2019
Antoine Griezmann oo tababarkiisii ugu horreeyey la qaatay kooxdiisa cusub ee Barcelona… + SAWIRRO
Deg Deg: Thierry Henry oo loo magacaabay macalinka cusub ee kooxda Monaco
Dajiye October 13, 2018
(Monaco) 13 Okt 2018. Halyayga xulka qaranka France iyo kooxda Arsenal ee Thierry Henry ayaa loo magacaabay macalinka cusub kooxda ka ciyaarta horyaalka France Ligue 1 ee Monaco.
Saraakiisha kooxda Monaco ayaa waxay go’aansadeen in Thierry Henry uu noqdo badalka tababare Leonardo Jardim oo shaqada laga ceyriyay khamiistii lasoo dhaafay sbabab la xiriira natiijo xumi kooxda ku timid kulamadii lasoo dhaafay.
War rasmi ah ee kasoo baxay kooxda Monaco ayaa lagu yiri “Monaco waxay shaaca ka qaaday in maalinta Talaadada ee soo aadan Thierry Henry si rasmi ah loogu dhawaaqi doono inuu yahay macalinka cusun ee kooxda ilaa iyo sanadka 2021”.
Thierry Henry ayaa ka bilaabi doona shaqadiisa cusub ee kooxda Monaco Isniinta soo socota, wuxuuna ka hadlay dareenkiisa kaga aadan shaqadan cusub ee loo magacaabay.
“Ugu horeyn waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo maamulka kooxda Monaco, fursada ay ii siiyeen inaan tababare ka noqdo koox aniga ahaan qaas ii ah, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku laabto Monaco, waxaana xiiseenayaa inaan wajaho caqabadaha soo aadan, ma awoodo xitaa inaan sii sugo inaan bilaawo la shaqeynta ciyaartoyda”.
Mehdi Ben Attia oo muujiyay sababta ay ugu adag tahay inuu ka qeyb qaato kulamada kooxda Juventus
Hazard oo ugu dambeyn Qiray inuu SABAB u ahaa in Chelsea laga Ceyriyo Mourinho, Wuxuuna iminka doonayaa....!!